Xasan Sheekh Oo Al-Shabaab Fariin Cusub u diray | Curubo.com	Thursday, July 20th, 2017	Home
Xasan Sheekh Oo Al-Shabaab Fariin Cusub u diray
Aug 6, 2014 - Comments off	Madaxweynaha Somalia Hassan Sheikh Mohamud oo lahadlaye Wakaalada Wararka ee Reuters ayaa sheegay iney Dowladiisu ay qorsheeneeso duulaan Cusub ay ku qaadaan kooxda shabab islamarkaana somalia howlgalkaas looga saaro.
Al_shabab ayaa Somalia qabsaday inta badan koonfurta iyo bartamaha Somalia sanadkii 2006 ilaa 2011 balse wixii intaa ka dambeeyay waxey umuuqdeen kuwo dowladda iyo AMISOM ay ka gacan sareeyaan madama laga qabsaday Magalooyin farabadan oo ay gacanta ku hayee.
Balse kooxda Alshabab oo xiriir wanaagsan lalaeh Ururka alqacida ayaa haatan maamula qeybo kamid ah bartamaha iyo koonfurta Somalia ,wuxuuna madaxweynaha uu sheegay in goobahaas haatan ay ku xoogan yihiin Alshabab laga saari doono howlagalkan marka uu bilowdo.
“howlgalka waxa uu bilaaban doonaa maalmaha soosocda “mohamud ayaa sidaa yiri intii uu ku guda jiray wareesi uu washighton ku bixinaye ,halkaa oo uu ugaga qeybgalayo shirka Africa iyo Mareykanka.
“waxaynu heesanaa goobaha Bartilmaameedka inoo ah ee uu howlgalku ku wajahanyahay ,waxaana kafileenaa guul”. Ayuu yiriu madaxweynaha Somalia.
Madaxweyne Hassan ayaa meesha ka saaray qataraha Alshabab ee Muqdisho oo ay kujriaan dilalka ay muqdisho ka geystaan sida dilkii Asbuucii lasoo dhaafay loogeystay Xildhibaan Maddeer isagoo sheegay in ay wadamada caalamka uklala simanyihiin.
Waxa uu yiri mohamud dhacdooyinkaasi waxay lamid yihiin kii westgate ee ay ku dhinteen Ilaa 67 ruux.
“tani waa Astaan daciifnimo “mohamud ayaa yiri “waa ay badasheen habka ayuu yiri madaxweynaha alshabab haatan.